Arsenal Oo Ay Godkeeda Biyo Ugu Soo Galeen Kuna Dhacayso Xaaladii Alexis Sanchez – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Arsenal Oo Ay Godkeeda Biyo Ugu Soo Galeen Kuna Dhacayso Xaaladii Alexis Sanchez
Kooxda Arsenal ayaa wajahaysa xaalad la mid ah midii ay kala kulantay xiddiga Alexis Sancuez iyo Mesut Ozil xilli uu xiddig muhiim ka ah kooxda ku war galiyay in uu kooxda isaga tagayo marka uu heshiiskiisu dhoco hadii aan miiska loo saarin heshiis la mid ah xiddigaha ugu muhshaharka badan.
Xiddiga khadka dhexe ee Aaron Ramsey oo sanadka 2019 uu dhacayo heshiiskiisa ayaa doonaya in ay kooxdu u soo bandhigto heshiis kordhin weyn si uu u saxiixo heshiis cusub hadii kale uu si xor ah isaga tagoyo kooxda.
Wargayska The Times ayaa sheegaya in uu Ramsey doonayo in kor loogu qaado heshiiskiisa kooxda oo uu haatan ka qaato lacag dhan 110 kun oo Gini gaar ahaan markii xiddigaha Henrikh Mkhitaryan & Pierre-Emerick Aubameyang ay qaadanayaan mushahar ku dhaw 180 kun oo Gini.
Arsenal ayaa doonaysa in ay ka fogaato xaaladii keentay in ay xiddigaha Ozil,Sanchez iyo Wishere galaan sanadkoodii ugu dambeeyay ee heshiiskooda.
Ozil ayaa ugu dambayn saxiixay heshiis kor loogu qaaday mushaharkiisa loogana dhigay 300 kun oo Gini halka uu Alexis Sanchez ku biray kooxda Man United xilli uuna Jack Wilshere wali mustaqbalkiisa u hibayn kooxda.
Ramsey ayaa dhaliyay 6 gool halka uu sidoo kale caawiye ka noqday 8 kale 18 kulan oo premier league ah oo uu ciyaaray laakiin uu dhaawac ku seegay kulamo badan oo premier League ah.